UMG Myanmar - Download Facebook Videos - BajarFB.com
The Official Facebook Page of UMG Myanmar |
UMG Myanmar ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ
FB URL: https://www.facebook.com/umgroups/
Common Purpose Co.,Ltd.
Win Finance Co.,Ltd
UMG Group of Companies၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍချဲ့ ထွင်မှုအဖြစ် UMG Logistic Co.,Ltd ကို၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားဌာနများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ UMG Logistics Co.,Ltdမှ ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများမှာ လေကြောင်းသယ်ဆောင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ လေကြောင်း-ရေကြောင်းနှစ်ဆင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်မှုစနစ်၊ ကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းခြင်း၊ ကုန်းတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်သိုလှောင်ရုံများတွင် သိုလှောင်ပေးခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခြင်းနှင့် ကုန်စည်သယ်ယူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်... #UMG_Logistics #UMG_Group_Of_Companies #Relentess_Pursuit_Of_Excellence
Seventy Eight Co., Ltdကို ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် WinningWay Co., Ltd နှင့်အပြိုင် မီးစက်များရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Matador အမှတ်တံဆိပ်မီးစက်များနှင့် ဝန်ချီစက်များကိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။ မီးစက်နှင့် ဝန်ချီစက်များအပြင် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Tennant ကြမ်းသန့်ရှင်းရေးစက်ကိရိယာများ၊ Klenco သန့်ရှင်းရေးသုံး ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်စက်ကိရိယာများအား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။ Klenco အမှတ်တံဆပ်ကို ယခုအခါ ရန်ကုန်နှင့်မြန်မာ့အချက်အချာ မြို့များရှိ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ဗဏီများကပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ Seventy Eight Co., Ltdတွင် မီးစက်များ၊ ဝန်ချီစက်များနှင့် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းသာမက စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများရောင်းချခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ပြင်ပ မီးစက်နှင့် ဝန်ချီစက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ #Seventy_Eight #UMG_Group_Of_Companies #Relentless_Pursuit_Of_Excellence
Winning Way Co., Ltd အား UMG Group of Companies လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင်ပင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ သတ္တုတွင်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် လူနေအဆောက်အအုံများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များနှင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေရေး စနစ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြင့်ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ Winning Way Co., Ltd တွင် 10 kva မှ 3250 kva ထိဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်သော ဓာတ်အားပေးစက်များကို ရရှိနိုင်ပြီး Mitsubishi, Kolowa နှင့် Matador အမှတ်တံဆိပ်များ ကုန်ပစ္စည်းများအားဖြန့်ချိပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ရေတို၊ ရေရှည် ဓာတ်အားပေးစက်ငှားရန်းခြင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက် ဆူညံသံများလျှော့ချပေးသည့် နည်းစနစ်များနှင့် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် control logic များ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ဖြင့် သုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆပ်တစ်ခုဖြစ်သော စပိန်နည်းပညာအသုံးပြု Matador မီးစက်များကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။ Matadorအမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံတကာနည်းပညာသုံး အင်ဂျင်၊ နည်းပညာမြင့် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်များနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်စနစ် (control system) များအသုံးပြုထားသည်။ ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၂၄ နာရီ ၇ ရက်ပတ်လုံး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် နာရီ ၇၀၀၀ ထိမောင်းနှင်နိုင်သည်။ အလိုလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည့် စနစ်ပါဝင်မှုကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်စက်ပစ္စည်းအနေအထားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပါရာမီတာ (ဆောင်ရွက်မှုပြ ဒိုင်ခွက်)ဖြင့် မှတ်သားနိုင်သကဲ့သို့ မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားပါက အလိုလျောက်အချက်ပြသည့်စနစ်ပါရှိခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အထူးစိတ်ချရသော မီးစက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ #Winningway #UMG_Group_of_companies #Relentles_Pursuit_Of_Excellence
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အဆင်ပြေချောမွေစေရန် သာမက နယ်ဝေးမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ရသူတွေအတွက် ပစ္စည်းတွေ ပါဆယ်တွေ ပို့ချင်တဲ့ အခါမှာ လူကြီးမင်းတို့အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Courier Service တစ်ခုဆိုရင်တော့ Beexprss ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်လိုင်စင်ရထားတဲ့ Courier Service ကို သတိတရနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်…. ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပကိုပါကောင်းမွန်လှတဲ့ Service တွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဆိုတော့ “ပို့ချင်ပါတယ် ဇီးရိုးနိုင်း…..…..” လို့သာ ပြောလိုက်ပါ ချိုသာသော အပြုံးများနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ဆီကို အချိန်နဲ့ မနှေး အမြန်ဆုံးရောက်ရှိလာပြီး ပို့ချင်တဲ့နေရာကို အဆင်ပြေပြေ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 09977835553 ကို ဟယ်လိုသာလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်…. #Beexprss_We_Deliver #လွယ်ကူသွက်လက်_Beexprss #Relentless_Pursuit_of_Excellence
UMG Group of Companies ရဲ့ ကုမ္ပဏီအခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UMG Motors Co.,Ltd ကတင်သွင်းဖြန့်ချိနေတဲ့ VESPA တံဆိပ် Italy 🇮🇹 နိုင်ငံထုတ် ဆိုင်ကယ်သုံးစွဲနေတဲ့ Customer နှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ VESPA ကို နှစ်သက်တဲ့ အချက်တွေ အားသာချက်တွေကို မျှဝေပေးသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…👍 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် နည်းပညာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ VESPA S 🛵, ရိုးရှင်းစတိုင်ကျပြီးသားဖြစ်တဲ့ Primavera 🛵, သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှု နည်းပညာမြင့်မားမှုတို့နဲ့MEDlEY 🛵ဆိုတဲ့ Model အမျိုးမျိုးလဲ ရှိတယ်နော်… ဘယ်လို Model ပဲဖြစ်ဖြစ် VESPA ဆိုတာနဲ့ ကြိုက်ပြီးသားဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် UMG Motors ကနေ ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေပါပြီနော်… VESPA တံဆိပ်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေကို ကြိုက်လဲဆိုတာ မျှဝေပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ! 🥰🥰
ယူတို့ရော KAWASAKI 🏍 ရဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေကိုကြိုက်လဲ ?? မန္တလေးမြို့က customer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဇင်အောင်ကတော့ သူကြိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြသွားပြီနော်… လူတကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုပေမယ့် အရည်အသွေးကောင်း ပစ္စည်းကောင်းမှ လိုချင်သူတွေအတွက် 🏍 Kawasaki ကိုတော့ မမေ့လိုက်နဲ့နော်… တခြားထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေလဲ ရှိသေးတယ်နော် ဆိုင်ကယ်ချစ် သူငယ်ချင်းတို့…. 🏍Kawasaki ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်(၁၅)၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် (၅၅)လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာ လူကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် 📞 09977835621 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းစူးစမ်းလို့ရပါတယ်နော်… #PS - JAPAN 🇯🇵 Brand ဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးကတော့ စိတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာ ချိဖချိမတို့သိပါတယ် #KAWASAKI 🏍
UMG Group of Companies သည် ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် တကောင်ဘွားကုမ္ပဏီလိမိတက်နှင့် ပူးပေါင်းကာ Season One Co., Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်.... Season One Co., Ltd သည် အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်ကားကြီးများကို ရောင်းချခြင်း၊ အဆောက်အဦးအုတ်မြစ်ချခြင်း၊ ဘိလပ်မြေလောင်းခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့နိုင်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်.... လူကြီးမင်းတို့၏ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.... #Season_One #UMG_Group_of_companies #Relentless_Pursuit_of_Excellence
Win Progress Co.,Ltd
ဝိုင်းဖွဲ့ကာ ကစား Wasuka စား